5 စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းနှင့်အဖြစ်မှန်၏လွဲမှားသောအမြင်များ Martech Zone
ကျနော်တို့အဆိုပြုချက်ကိုအခုအချိန်မှာလုပ်နေကြတာပါ၊ သူတို့မျှော်လင့်ထားတာကသူတို့လိုချင်တာကိုပြောတာပါ မြန်မြန်လှုပ်ရှားပါ။ အရောင်းဝန်ထမ်းအများစုသည်အမြန်လက်မှတ်ရရန်အခွင့်အလမ်းနှင့်တံတွေးထွေးကြသော်လည်းယခုကျွန်ုပ်ကိုသတိပေးအမှတ်အသားတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်သည်။ လျင်မြန်စွာရွေ့လျားခြင်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်လျင်မြန်စွာပို့ဆောင်ခြင်းကိုမျှော်လင့်နိုင်သည်။ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ၊ ပြိုင်ဆိုင်မှုနှင့်အခွင့်အလမ်းတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့စေ့စေ့စပ်စပ်ဆန်းစစ်သည်အထိဖြစ်နိုင်လိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းရလဒ်များကိုမည်မျှလျင်မြန်စွာရနိုင်မည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိရသေးပါ။
အဲဒါလွဲမှားနေတာလား။ အထင်လွဲမှားလား ဒါမှမဟုတ်မျှော်လင့်မထားတာဖြစ်နိုင်တယ်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်င်အထက်ပါအားလုံးပေါင်းစပ်ပေမယ့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်စိန်ခေါ်မှုများရှိသည်။ မည်သည့်ပလက်ဖောင်း၊ အလယ်အလတ်အဆင့်သို့မဟုတ်အေဂျင်စီ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုမဆိုစဉ်း စား၍ မရနိုင်သောရလဒ်များကိုညွှန်းဆိုလေ့ရှိသဖြင့်တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်တို့သည်မိမိကိုယ်ကိုယူဆောင်လာသည်ဟုထင်မြင်မိသည်။
တူသောရှေးရှေးများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဟော့စပေါ့ ထွက်ရှိဒဏ္manyာရီအများအပြားအသိအမှတ်ပြုရန်။ တစ်ခုချင်းစီ၏အောင်မြင်မှုကိုတိုးတက်စေရန်အတွက်အဓိကကျသောအမြင် ၅ ချက်၊ အဖြစ်မှန်နှင့်အကြံဥာဏ်များဖြင့်ဤအချက်အလက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်ကိုသူတို့ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။
အမှန် - စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမှဖန်တီးသောအကြောင်းအရာများ၏ ၆၅% သည် အရောင်းအားဖြင့်ဘယ်တော့မှမ.
အမှန် - စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဘတ်ဂျက်၏ ၁၀% အောက်သာသည်အားထုတ်မှုအတွက်ဖြစ်သည် အရောင်းရလဒ်များကိုထုတ်လုပ်.
အမှန် - ကုမ္ပဏီ ၂၄% သာတရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားသည် အရောင်းသို့စျေးကွက်ရှာဖွေရေး လက်ကမ်းစာစောင်။
အမှန် - ကိရိယာများလုပ်နိုင်သည် သင့်ရဲ့အရောင်းဖြစ်စဉ်ကို overcomplicate နှင့်သင်၏ဘတ်ဂျက်ကိုဖကျြဆီး။
အမှန် - အကြောင်းအရာ၏ 28% ဖြစ်ပါတယ် ဘယ်တော့မှရှာမတွေ့ဘူး ရောင်းအားက ၄ င်းတို့အချိန်၏ ၃၁% ကိုရှာဖွေသည်။
အဆိုပါ ဟော့စပေါ့ အရောင်းမြှင့်တင်ရေးပလက်ဖောင်းသည်အရောင်းအဖွဲ့များကိုအခြေအနေတစ်ခုစီအတွက်အသင့်တော်ဆုံးအကြောင်းအရာများနှင့်ဆက်သွယ်ပေးသည်၊ သုံးစွဲသူများအားအကြောင်းအရာများကိုတင်ပြရန်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသောနည်းလမ်းများနှင့်ဖောက်သည်များကပါ ၀ င်သည့်အကြောင်းအရာများကိုရှာတွေ့ခြင်းရှိမရှိကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီမြင်သာစေသည်။ အဆင့်မြင့် analytics ကွင်းများနှင့်ပါဝင်သည့်အရာများကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက်လုပ်ဆောင်နိုင်သောထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပေးသည်။
Tags: စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်ရောင်းအားသဘောပေါက်ခြင်းအဖြစ်မှန်နှိုင်းယှဉ်အမြင်အဖြစ်မှန် vs အမြင်အမှန်အရောင်းနှင့်စျေးကွက်ရောင်းအားနှင့်စျေးကွက်မြှင့်တင်ခြင်းရောင်းအားအကြောင်းအရာ